Su'aal: Dhiiga caadada iyo naas nuujinta?
Author Topic: Su'aal: Dhiiga caadada iyo naas nuujinta? (Read 1549 times)
« on: December 20, 2018, 04:43:22 PM »
Asc aad ayad u mahadsan tahiin marka hore secend
Somalida qaar waxay aaminsan tahiin hadii aad dhiiga caadada hesho adigoo ilmo lab ah nuujinaya inuu dhib u keenayo. Arinka maxa ka jira dhakhtar wxn ahy hooyo nuujisa wiil bishi 6 ayan helay dhiiga cadada intii hore maan heli jirin
Re: Su'aal: Dhiiga caadada iyo naas nuujinta?
« Reply #1 on: April 21, 2019, 09:23:42 AM »
Waxba kama jiraan, waana khuraafaat adigoo caado qaba ama aan qabinba cunugaaga waad nuujin kartaa wax dhib ah adiga iyo cunugaagaba kuu keeni meyso. sidoo kale hooyooyin badan ayaa yiraahda haddii ilmaha hooyadu nuujiso markay uur yeelato cunuga ayaa xanuunsado, taasina horay ayaan qoraal gooni ah ugu faahfaahinay ee ka akhriso halkaan: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=2529.0
Views: 2931 April 28, 2016, 04:37:20 PM
Views: 6169 November 03, 2012, 09:51:06 AM
Views: 6452 March 14, 2015, 03:41:06 PM
Views: 187408 July 24, 2009, 12:54:57 AM